सोप किन खाने ? यस्त छन् साेप खादाका फाइदै फाइदा, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
खाना खाइसकेपछि हामी सोप चपाउँछौं । न यो धेरै स्वादिलो हुन्छ, न बेस्वादको । न यसलाई अघाउनेगरी खाइन्छ, न कुनै तलतल मेट्न। त्यसो भए सोप किन खाइएको होला ?खाना पचाउनका लागि । मुखको दुर्गन्ध हटाउनका लागि ।
सोपको फाइदा त्यती मात्र छैन । किनभने यो क्याल्सियम, सोडियम, आयरन, पोटासियमको स्रोत पनि हो । सोपमा औषधिय गुण हुन्छन्। खाना खाइसकेपछि सोप चपाउनुको खास फाइदा छ ।
कहिलेकाहीँ कब्जियत हुनु असामान्य होइन । तर नियमित रुपमा महिनौंसम्म कब्जियत हुन थाल्यो भने यसले अरु अनेकौं समस्या निम्त्याउँछ । लामो समयदेखि भइरहेको कब्जियतको उपचारका लागि औषधि दिनुअघि चिकित्सकले हामीलाई आफ्नो खानपान र 18मा केही परिवर्तन गर्न सुझाउनेछन् । यस्ता सुझावअनुसार खानपानमा परिवर्तन गर्दा कब्जियतको समस्या घट्छ।
आफ्नो भोजनमा सागसब्जी, फलफूल र होल ग्रेनजस्ता रेशायुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ । भोजनमा सागसब्जी र फलफूलको मात्रा बढी हुनुपर्छ । रेशा (फाइबर)ले कब्जियत हुन दिँदैन र पेट सफा रहन्छ ।
तर दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र तयारी (चाउचाउ र यस्तै प्याकेटका) खानेकुरा कब्जियत नहटुन्जेल भरसक नखाने र खाए पनि थोरै मात्र खाने । किनभने यी खानेकुरा रेशायुक्त हुँदैनन् ।
एसिडिटी वा पेटको ग्यासबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
एसिडिटी वा ग्यास । पेट ढुस्स फुल्ने । खानामा अरुची हुने । तपाईंलाई लाग्दो हो, यो सामान्य कुरा हो ।तर, एसिडिटी वा ग्यासलाई बेवास्ता गर्नुभयो भने यो असामान्य बन्न सक्छ । भोलिका दिनमा तपाईंलाई जटिल रोगको शिकार बन्नसक्नुहुनेछ ।
-त्यसबाहेक, सानो चिया चम्चामा थोरै ज्वानो, सिङ्गो जिरा, वीरे नुन र लसुन हालेर मिसाउने र त्यसलाई राम्ररी चपाउनाले पनि पेटमा रहेको ग्यास कम हुने गर्छ ।
Don't Miss it बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरलाइ पुग्ने फाइदाबारे, जान्नुहाेस्
Up Next के तपाइलाइ टाउको दुख्ने समस्या छ ? सधैँ यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुहाेस्
सन् २०२० मा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास हुनेछ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नियाल्दा यो वर्षभित्रै प्रविधिले ठूलो…